Yakazara kukiya, inosungirwa nyika yese yekudzivirira muAustria
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Austria Kuputsa Nhau » Yakazara kukiya, inosungirwa nyika yese yekudzivirira muAustria
Austria Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Yakazara kukiya, inosungirwa nyika yese yekudzivirira muAustria.
Hurumende yeAustria yakatomisa kuvharika kwevasina kuvharirwa mukuyedza kudzikisa huwandu hwezvipatara pakati pekuvhiya kwenyaya dzeCCIDID-19.
Chancellor weAustria, Alexander Schallenberg, yakazivisa nhasi kuti kuvharika kuzere kwenyika kuchatanga neMuvhuro, Mbudzi 22 uye kwekupedzisira kwemazuva gumi ekutanga.
Schallenberg akawedzera kuti zvirambidzo zveCCIDID-19 zvinogona kuwedzerwa kana huwandu hwehutachiona husina kutanga kudonha, asi vakasimbirira kuti kuvharika kwacho hakuzopfuure mazuva makumi maviri nerimwe.
Chiziviso chaSchallenberg chakauya mushure memusangano wemagavhuna mapfumbamwe, vaviri vacho vaive vatopika kuunza zvivharo mumatunhu avo nemusi weMuvhuro, mudunhu rekumadokero kweTyrol.
Matanho matsva ane chekuita nehuwandu hwevanhu venyika. Hurumende ye Ositiriya yakatoisa kuvharika kwechikamu pane vasina kuvharirwa mukuyedza kudzikisa huwandu hwekurapwa mukati mekuvhiya kweCCIDID-19 kesi.
Kana kuvharika kwakazara kwapera, zvirambidzo zvinoramba zviripo kune vasina kubayiwa.
Hurumende yeAustria yakarairawo ruzhinji rwenyika kuti vabaye nhomba kubva muna Kukadzi 1 mukuyedza kugadzirisa hutachiona hutsva hweCOVID-19.
“Hatina kukwanisa kugutsa vanhu vakakwana kuti vabaye jekiseni. Kwenguva yakareba, ini nevamwe takafunga kuti munogona kunyengerera vanhu kuti vabaiwe, ”Chancellor akadaro, achipa chikonzero chake chegwaro rekudzivirira nyika.
Schallenberg vakachema chema nevezvematongerwo enyika, kushora kwakasimba, uye nhau dzenhema dzinorwisana nejekiseni.
Ositiriya ine imwe yemhando yakaderera yekudzivirira kumadokero kweEurope, iine 65% chete inoculated kurwisa hutachiona hunouraya zvichienderana nedata kubva kuJohns Hopkins yunivhesiti.
Hutachiona hunenge huri pakati pepamusoro-soro mukondinendi. Nhamba yezviitiko zvemazuva manomwe inomira pa971.5 pa100,000 vanhu.